Inthanethi, Marketing Inthanethi
Marketing mkhankaso - amathuluzi kanye nemisebenti lehlose ukukhuthazwa kwezimpahla, nezinsiza, umkhiqizo noma ubuchwepheshe. ukukhangisa umkhankaso Modern kancane kancane amanzi anciphe ku esedlule. Endaweni yabo kuza uhlobo esiphumelela ngokwengeziwe ukukhuthazwa - ukumaketha ezibangelwa amagciwane. Kungaba nokuguqulwa. Ngokwesibonelo, isiqophi viral - lena uhlobo ethandwa kakhulu marketing.
Ukubikezela ukusebenza kwe nokuguqulwa umkhankaso viral akunakwenzeka, ngakho-ke akufakwanga emkhankasweni marketing. Lokhu kuhlanganisa kuphela izindlela ukukhuthazwa okubhekiswe egqoke ukumaketha ezibangelwa amagciwane. Lokho kudalwa ngamabomu amathuluzi ukumaketha.
Lesitshalo viral imikhankaso ukumaketha
Kunzima ukunquma ukuthi ezinye izinhlobonhlobo yesimanje viral imikhankaso ukumaketha izosetshenziswa esikhathini esizayo esiseduze njengoba imibono brilliant ngempela ephakamayo angesabi. Modern umkhankaso wokudayisa viral kungaba njengoba eliyingqayizivele futhi empeleni kuyathakazelisa ukuthi izethameli eziqondiwe basakaza ukukhangisa ngokwabo. Ukuthi le ndlela yokuqhuba umkhankaso marketing ngokuthi "izwi lomlomo".
imikhankaso Ready ne mancane amathuba okuthi zidonse ukunaka kwanoma izilaleli njengenhlangano ekukhangiseni isilinganiso ngoba abantu abaningi abanobandlululo. It ngokuvamile uhlanganiswa ukunqunywa imicabango yabantu futhi imfucumfucu. Okungukuthi, kuba nemibono zemvelo viral, ngoba izilaleli akazange ekuqaleni ukuzibona njengoba nokukhangisa. Ukuze izethameli eziqondiwe ithuluzi ezifana marketing kulingana ukuzijabulisa. Ngokuhamba kwesikhathi, kusobala, ezinye kubahlanganyeli "izwi lomlomo" bayobona ukuthi kwangena nokukhangisa. Kodwa akusho ukuthi lokhu ukukhansela iqiniso ukuthi kukhona kahle nezivakashi futhi wathola lapho ecabanga wakhe wokwaneliseka zokuziphatha.
Ukubheka ukuthi viral imikhankaso ukumaketha yimpumelelo eminyakeni embalwa edlule, ungase uthole izibalo ezithakazelisayo. It is esetshenziswa onjiniyela ukumaketha isu. Ikhumbula zamanje virtual ukukhangisa amasu, kungenzeka ukuba akwazi ukusungula uhlobo eziyingqayizivele umkhankaso ezibangelwa amagciwane. Ngesikhathi esifanayo akufanele kube ahlotshiswe ngokweqile. Abamele izethameli eziqondiwe kufanele ucabange ukuthi bayakhubeka phezu ukuzijabulisa ezithakazelisayo, isibonelo, i-movie othakazelisayo.
Izibonelo viral imikhankaso ukumaketha
I abaphumelela kakhulu esidlule yamuva, izinhlobo eziningana viral imikhankaso ukumaketha. Imikhankaso ukuthi udala okuqukethwe ukuzijabulisa, khumbula ukuthi izilaleli uyakwazi self-khetha ukubuka izikhangiso futhi izinto ezihlobene. Ngemva kokubukela i-ukukhangisa viral lezi abameleli efanayo-Asia Ephakathi wahlanganyela ekusakazeni ke, ngoba bafuna ukwabelana ngolwazi nomphakathi.
Inkinga izikhangiso, okuyinto unake kancane kube udumo futhi uncika ukubaluleka ukuzijabulisa isikhangiso kungaba isu yimpumelelo kakhulu. Izinga lapha ikakhulu Psychology lomuntu, ngoba abantu abaningi banesithakazelo ezintweni engavamile futhi ongaziwa.
Ukudala yimpumelelo viral umkhankaso wokudayisa uhlobo ungahlela zokuxhumana eline iklayenti. Lelisu livumela umbukeli ukuzizwa ingxenye umlando othile. Eqinisweni, ngokusebenzisa indlela efanayo okukhona isiqophi imidlalo. Umsebenzisi ngeke isikhathi sokuthola ulwazi mayelana kwenzakalani yevidiyo noma esayithini ethile. Lokhu kuzokwenza ukuheha amakhasimende kokuphakelwa kumkhangisi.
Interactive ukumaketha izikimu kufanele okukhulu ezingaba ezibangelwa amagciwane. Lapho abathengi bayakwazi ukuhlanganyela kakhulu ngqo nenkampani, baqala sizokwenza impumelelo yayo. Abantu kungenzeka ukuba sinake labo amafemu ukuthi ubaphatha ngokulingana. Ngokwesibonelo, uma umkhangisi ucela iqhaza ukuhlolwa noma ukuhlola umkhiqizo.
Lapho ukubeka ukukhangisa viral?
amawebhusayithi ahlukahlukene kanye nezingosi zokuxhumana nabantu ukunikeza izindlela ezingabizi lapho abantu bengaphila uxhumana ukukhangisa. Futhi iyindawo ekahle yokuphila kulabo ulwazi. Vala-site - indawo engcono ukuqala umkhankaso viral, ngoba abasebenzisi bangakwazi ngokushesha ukwabelana ngendlela abazizwa ngayo. Lokhu kunomthelela ukusabalala ukukhangisa evulekile.
Sami amasayithi akuvumela ukusebenzisana nge ukukhangisa viral ungakwazi futhi ithandwe. brand abaningi abadumile inkhundla esinjalo imiklamo emisha, amehlo kanti nabantu abahlosiwe.
With ukuthuthukiswa amasayithi amasha kanye nokwethulwa kwemikhiqizo, abakhangisi ngizile ezinhlotsheni ezintsha imikhankaso ukumaketha, angasetshenziswa ukuze ubeke uphawu ezibangelwa amagciwane. Ngokwesibonelo, ungakha i-movie okuncane mayelana umcimbi oqanjiwe. incazelo Special akukwazi ukunikezwa, ngoba ukuntuleka kolwazi kuzokhuthaza isiqophi lomamukeli viral ukuba nesifundo esinzulu idatha. Ukuthuthuka akudingekile ukusebenzisa izinkomba ngqo sha, kodwa ungasebenzisa Amacebo. ukumaketha okunobuthi kukhawulwe kuphela lokusungula abakhangisi, ngakho umkhankaso ophumelele kuyoba ngokuphelele ezingalindelekile.
Indlela yokwakha iqembu "VKontakte" zokuthengisa? Izingxenye ezisemqoka impumelelo yokuthengisa iqembu
Zonke izikhungo yezitolo umthombo owodwa: Fast, elula futhi ephephile!
Amathuna izigcwelegcwele 90: isithombe. Amathuna izigcwelegcwele "Uralmash". Izikhumbuzo phezu kwamathuna izigcwelegcwele
Hopkins Bernard. Biography, amaqiniso athakazelisayo ngokuphila we boxer abadumile